इटालीसँग खेल्नुअघि अष्ट्रियाका प्रशिक्षक फोडाले दिए यस्तो प्रतिक्रिया « Asia Sanchar : Nepal News Live
इटालीसँग खेल्नुअघि अष्ट्रियाका प्रशिक्षक फोडाले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
प्रकाशित मिति : 26 June, 2021 2:37 pm
युरोकप फुटबलमा आजदेखि नकआउट चरण अर्थात अन्तिम १६ का खेल सुरु हुँदैछन्।
पहिलो खेलमा राति पौने १० बजे वेल्स र डेनमार्कबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। उक्त खेल नेदरल्यान्ड्सको जोहान क्रुफ एरिना हुँदैछ। समूह ‘ए’ को दोस्रो स्थानमा रहँदै अन्तिम १६ मा पुगेको वेल्सले समूह ‘बी’ को दोस्रो स्थानबाट अन्तिम १६ मा पुगेको डेनमार्कसँग खेल्न लागेको हो।
समूह चरणका खेलमा डेनमार्कले रुसलाई र फिनल्यान्डलाई हराएको थियो भने बेल्जियमसँग पराजित भएको थियो। यस्तै वेल्सले स्विजरल्यान्डसँग बराबरी खेलेको थियो र टर्कीलाई हराएको थियो भने इटलीसँग पराजित भएको थियो।
यस्तै युरोकपमै राति पौने १ बजे इङ्ल्यान्डको वेम्बली स्टेडियममा इटली र अस्ट्रिया खेल्दैछन्। इटलीले समूह चरणका तीनवटै खेल जितेको थियो। अस्ट्रियाले नर्थ म्यासेडोनिया र युक्रेनलाई हराएको थियो भने नेदरल्याण्ड्ससँग पराजित भएको थियो।
पहिलोपटक युरोकपको नकआउक चरणमा पुगेको अष्ट्रिया ४ पटक विश्वकपको उपाधि जितेको इटालीलाई हराउने सोचमा छ। अष्ट्रियाका मुख्य प्रशिक्षक फ्रान्सो फोडाले इटालीलाई पराजित गर्दै अन्तिम ८ मा प्रवेश गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन्।
‘हामी इतिहास रच्ने बाटोमा छौं, फोडाले भनेका छन्, ‘इटालीलाई पराजित गर्दै हामी अर्को इतिहास बनाउने सोचमा छौं।’ फोडाले आफ्ना खेलाडीहरुको प्रदर्शनको प्रशंसा गर्दै टोली हर चुनौतीको सामना गर्न तयार हरेको बताएका छन्।
इटाली र अष्ट्रियाबीच हालसम्म ३५ खेलमा प्रतिस्पर्धा भएको छ। तीमध्ये १६ खेल इटालीले जितेको छ भने ११ खेल अष्ट्रियाले जितेको छ। दुई टोलीबीचको ८ खेल बराबरीमा सकिएको छ।
यी हुन् बालोन डी’अरको दाबेदार खेलाडी, कसले मार्ला बाजी ?
केही समयका लागि फुटबलको मौसम सुस्ताएको छ। युरोकप फुटबल र कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगिता सएिसँगै
अर्जेन्टिना भर्सेस ब्राजिल : हेड टु हेडमा को बलियो ?
कोपा अमेरिकाको उपाधिका लागि ब्राजिल र अर्जेन्टिनाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल नेपाली समयअनुसार आइतबार बिहान ५ः४५
युरोकपको सेमिफाइनल समीकरण पूरा, यी चार टिमबीच उपाधिको होड, को बलियो ?
लण्डन – युरोकप २०२० को सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। शनिबार राति भएका अन्तिम दुई